GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mapudungun Mongolian Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wichi Xhosa Yoruba Zulu
Ee, Baịbụl nwere ike inyere gị aka. Chineke na-enyere ndị na-efe ya aka ma ha na-arịa ọrịa. Baịbụl kwuru banyere onye Chineke na-arịa ọrịa, sị: “ Jehova ga-enye ya ume mgbe ọ nọ n’ute ọrịa. ” (Abụ Ọma 41:3) Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa na-anaghị ala ala, ihe atọ a ga-enyere gị aka idi ya:
Kpegara Chineke ekpere ka o nye gị ike ị ga-eji die ya. I mee otú a, Chineke ga-enye gị ‘ udo ya nke karịrị echiche niile. ’ Udo ahụ Chineke ga-enye gị ga-eme ka ị kwụsịlata ichegbu onwe gị, meekwa ka i die nsogbu ahụ.—Ndị Filipaị 4:6, 7.
Na-enwe obi ụtọ. Baịbụl kwuru, sị: “ Obi nke na-aṅụrị ọṅụ na-eme ka ahụ sie ike, ma mmụọ na-eru uju oge nile na-akpata ọrịa. ” (Ilu 17:22, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society) Na-enwe obi ụtọ. Inwe obi ụtọ ga-eme ka obi ghara ịna-ajọcha gị njọ, ọ ga-emekwa ka ahụ́ gbasie gị ike.
Obi sie gị ike na ihe ga-aka mma n’ọdịnihu. Inwe olileanya na ihe ga-aka mma ga-eme ka obi na-atọ gị ụtọ, ọ bụrụgodị na ị na-arịa ọrịa na-anaghị ala ala. (Ndị Rom 12:12) Baịbụl kwuru na oge na-abịa mgbe a na-agakwaghị enwe onye ga-asị: “ Ana m arịa ọrịa. ” (Aịzaya 33:24) Mgbe ahụ, Chineke ga-ewepụ ọrịa niile nyịrị ndị ụlọ ọgwụ. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru na Chineke ga-eme ka ndị mmadụ ghara ịna-aka nká. Ọ sịrị: “ Ka ahụ́ ya dị ọhụrụ karịa otú ọ dị n’oge ọ bụ nwata; ka ọ laghachi otú ọ dị n’oge o nwere ike okorobịa. ”—Job 33:25.
Lee ihe atọ ga-enyere ezinụlọ gị aka ma ọ bụrụ na ahụ́ adịghị nwunye gị ma ọ bụ di gị.